Kedu ka esi tuo broccoli maka oyi n'oge obibi maka nwatakiri? - Maka onye nnabata - 2019
Na-echekwa uru: otu esi ehichapụ kabeeji broccoli maka oyi n'oge obibi?
Broccoli bụ osisi kabeeji kwa afọ. E nwetara broccoli kabeeji ngwakọ ọ bụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ kọlịflawa na onye ikwu ya.
Rie osisi akụkụ - unopened budsnke bụ "isi" nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ odo odo.
Broccoli bụ protein dị ukwuu nke nwere vitamin na mineral, amino acids, na fiber. Ihe oriri a bara uru iri nri ndị nwere ọrịa obi, nakwa maka igbochi kansa.
Ịgba chaa chaa bụ otu n'ime ụzọ iji chekwaa kabeeji n'ụlọ, ma ị nwere ike ịchọpụta ma enwere ike ịchekwa broccoli na okpuru ulo ma ọ bụ n'okpuru ụlọ anyị.
Uru nke usoro
Enwere m ike ifunahụ broccoli kabeeji maka oyi? Nri oyi maka ngwaahịa oyi bụ ihe dị mfe ịchekwa, ha mgbe niile, zọpụta oge na ego ezinụlọ. Ị nwere ike ịmụta banyere ụzọ ndị ọzọ iji chekwaa broccoli, nakwa otu esi akpo kabeeji maka oyi na ụlọ, site na isiokwu anyị.
Ị nwere ike ifriizi ihe niile, na broccoli abụghị ihe ọzọ, ihe kachasị mkpa bụ ka a gwụchaa ihe na-egbuke egbuke ziri ezi.
Broccoli oyi kpọnwụrụ: ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ? Broccoli kabeeji, nke na-agafezi na-edezi, na-edebe onwe ya uru bara uru na uto ọhụrụ kabeeji.
Kedu ka esi tuo broccoli maka oge oyi? Broccoli kacha mma oyi kpọnwụrụ n'etiti okpomọkụ, na June - July.
Iji mee ka mmiri ghere na ị ga-ahọrọ ndị na-eto eto na ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ndị pests na-adịghị emetụta ma na-enweghị ọnya na ọnyá.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị na-anakọta kabeeji ọhụrụ site n'ubi gi ma ọ bụ zụta na ahịa.
Kedu otu esi akwadebe broccoli maka na-ede oyi maka oyi? Kasị mma ọnọdụ nke akwụkwọ nri ahụ, ogologo oge ka a ga-echekwa ha na friza. Na ịkwadebe ihe oriri maka ịfrika, ịkwesịrị ime ọtụtụ n'ime ihe ndị a dị mfe:
Richaa ihe oriri na mmiri mmiri na-agba ọsọ kpochapu pesticides na mmetọ. Ọ bụrụ na ụmụ ahụhụ dị na broccoli, mgbe ahụ tinye ya na brine maka ọkara otu awa, wee kpochapụ ya.
Site na broccoli, wepụ akwụkwọ niile, belata ihe siri ike. Kpofuo inflorescences n'ime oberenke mere na ha niile bụ otu ihe hà.
Kedu broccoli na-amị mkpụrụ osisi?
Broccoli kacha mma nke oyi na-acha akpa plastic ma ọ bụ containers, bụ nke a na-ewepụ ikuku niile ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Na-etinye kabeeji ahụ n'ime ngwugwu na obere akụkụ, nke mere na ọ ga-emecha mee ka ego dị mma. Ma echefukwala dee ụbọchị kefriza.
Ebee ka ichere broccoli? A na-etinye broccoli kabeeji ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ, nke kachasị mma na-arụ ọrụ ngwa ngwa kefriza.
Kedu ụdị broccoli na-emetụ ihe? Ọnọdụ kachasị mma maka broccoli na-egbuke egbuke maka nchekwa ogologo oge ga-abụ okpomọkụ site na -18 ° C ruo -23 ° C.
Eji echekwa ihe oriri a na-echekwa oyi ruo ọnwa itoolu na onye na-eme ihe ubi, na mpaghara nke miri emi - ruo ọnwa iri na anọ.
Kedu ụdị dị iche iche nke broịlị freezing maka oyi? maka nri nwa?
Site na mkpụrụ akwụkwọ nri maka nwa kwesịrị ekwesị karịsịa nlezianya. Ha ga-abụ ndị na-enweghị mmebi na yellowness. Họrọ naanị na-eto eto siri ike inflorescences.
Kedu ka esi na-esi na freeze broccoli maka oyi maka nwatakịrị ma ọ bụ ụmụaka? Ọ bụrụ nwa ahụ na-ata ahụhụ nri ihe oriri, mgbe ahụ, ịkwesịrị ịkwanye broccoli n'ihu griza maka 1-2 awa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị zụrụ ihe oriri, ma ọ bụghị eto n'ubi gị.
Jiri obere ihe nfe maka griza. Nri akwụkwọ nri akọrọnke mere na otutu ice anaghị emepụta.
Ọ ga-ekwe omume ifriizi broccoli na kọlịflawa? Kọlịflawa kefriza dị nnọọ ka broccoli kefriza. Akwụkwọ nri abụọ a enwere ike ịgbanye ọnụỌ dị mfe karịsịa maka ndị na-esi nri abụọ.
Otu esi esi ifuii ahịhịa Brussels na-epulite n'ụlọ, nakwa na-acha ọcha maka oyi, gụọ na weebụsaịtị anyị.
Kedu ka esi na-esi ghere broccoli maka oyi n'oge obibi? A na-eji blanching mee ka a ghara ịkụzi broccoli.
Nke a bụ usoro na-ebibi ihe pụrụ ichedị na kabeeji, mgbe ọ na-echekwa ahụ ụtọ na ísì nke kabeeji mgbe ọ nwụsịrị.
E nwere ike ịchọta Broccoli n'ụzọ abụọ:
Tinye ihe mgbochi ọkụ, jupụta na mmiri n'ụzọ abụọ. Ejicha ite nke abụọ na mmiri mmiri. Mgbe mmiri na-enwupụta, tinye broccoli n'ime ya, obụpde maka 1-2 nkeji, wee mikpuo n'ime mmiri mmiri.
Ntugharị! Ịchekwa acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ broccoli tinye na mmiri oyi na ihe ọṅụṅụ nke ọkara nke lemon.
Na igwe mmiri ọkụ abụọ
Na igwe ahihia abuo, mezie akwukwo nri maka 3-4 nkeji.
Mgbe obosara, wepu kabeeji na hapụ ịkụ na nhicha kichin.
Iji nọgide na-enwe broccoli dị ka ihe dị mma ma na-egbuke egbuke mgbe o kpochapụrụ, ọ kachasị mma ifriizi ha akọrọ.
Ọ dị mfe ịkụzi broccoli kabeeji maka oge oyi, ihe kachasị mkpa bụ ịgbaso iwu niile nke ifriizi na nchekwa. Ekem akwukwo nri akwukwo ndu nwere obi uto gi. ruo oge ọzọ.
Onye nchịkọta ụwa Ezidri Snackmaker FD500
Ụdị tulips, ìgwè na klas nke okooko osisi
German nduru ìgwè oke mọnk
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Na-echekwa uru: otu esi ehichapụ kabeeji broccoli maka oyi n'oge obibi?